प्रयोगशालामा नमूनाको चाङ, धान्न सकेन पिसिआरले :: Setopati
प्रयोगशालामा नमूनाको चाङ, धान्न सकेन पिसिआरले
विवेक राई काठमाडौं, जेठ १९
कोरोना परीक्षण गर्ने आरटी-पिसिआर मेसिन अभाव हुँदा प्रयोगशालाहरूमा स्वाब परीक्षण समयमै हुन सकेको छैन। क्षमताभन्दा दोब्बर नमूना आउन थालेपछि प्रयोगशालाहरूमा नमूनाको चाङ लाग्न थालेको छ।
आइतबारमात्र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा २ हजार नमूना आएको थियो। जबकी यो प्रयोगशालाको क्षमता भनेको दैनिक १ हजार जनाको परीक्षण गर्ने हो। प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रूना झाले २ हजार १ सय वटा नमूना समेत आउने गरेको जानकारी दिइन्।
धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेको प्रयोगशालामा पनि दैनिक ६ सय नमूना आइरहेको छ। प्रयोगशालाले भने दैनिक २ सय जनाको परीक्षण गर्नसक्छ।
हामीसँग यस्ता मेसिन देशभर २० वटा छ। यीमध्ये टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले मात्र दैनिक १ हजार जनाको परीक्षण गर्न सक्छ। बाँकी प्रयोगशालाको क्षमता भनेको दैनिक डेढदेखि दुई सय हो। त्यसैले हामीले अहिले गर्न सक्ने भनेको दैनिक ३ हजार जनाको परीक्षण हो।
पछिल्लो समय भारतबाट ठूलो संख्यामा मानिस आउन थालेपछि अहिले भएका प्रयोगशालाले परीक्षण धान्न नसक्ने भएको छ।
गत जेठ २ गतेयता सुदूरपश्चिममा मात्र ४६ हजार बढी मानिस भित्रिएका छन्। तर यो प्रदेशमा पिसिआर मेसिन जम्मा एउटा छ जसको क्षमता दैनिक २ सयदेखि ३ सय छ।
मेसिनले धान्न नसकेपछि सरकार फेरि विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको उही आरडिटी किटमा भर परेको छ। भारतजस्तो उच्च जोखिमयुक्त ठाउँबाट आएका त्यत्रा मानिसहरूलाई सरकारले आरडिटीकै भरमा घर पठाउने तयारी गरिरहेको छ।
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले हिजोमात्र २४ हजार आरडिटी किट जिल्लाहरूमा पठाइएको जानकारी दिए।
विज्ञहरूले भने भारतबाट आएकाहरूको अनिवार्य पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाउँदै आएका छन्।
यसको आवश्यकता पछिल्लो बाँके र झापाका घटनाले पनि पुष्टि गर्छ।
बाँकेको नरैनापुरमा मात्र भारतबाट आएका ११४ जनामा संक्रमण देखियो। जसमा एक जनाको मृत्यु समेत भयो। उनीहरू सबै भारतको महाराष्ट्र, नयाँदिल्लीलगायत ठाउँबाट आएका थिए। तर उही ठाउँबाट आएका सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका मानिसहरूको भने सरकार आरडिटीबाटै परीक्षण गर्ने तयारी गर्दैछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत पिसिआर परीक्षणको दायरा फराकिलो पार्न तयारी थालिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले पिसिआर परीक्षण बढाउन मेसिन थप्ने योजना भइरहेको बताए।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर अधिकारीले विभिन्न ठाउँमा ५० भन्दा बढी पिसिआर मेसिन रहेको जानकारी आएको भन्दै ती मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन काम अघि बढेको बताए।
'हामी ती मेसिन कुन अवस्थामा छन्। त्यसलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भनेर काम अघि बढाउँदैछौं,' उनले भने।
सरकारले तेस्रो मुलुकबाट पनि दैनिक ३ हजार ५ सय मानिस नेपाल फर्काउने निर्णय गर्दा अहिले भएका पिसिआर मेसिनले मात्र ती मानिसका परीक्षण गर्न धान्दैन। मेसिनकै अभावका कारण मृत्यु भएका ८ जना कोरोना संक्रमितमध्ये अधिकांशको रिपोर्ट मृत्युपछि मात्र आएको छ।
वीरगन्जको नेसनल अस्पतालमा मृत्यु भएका बाराका एक पुरूषको भने मृत्यु भएको १० दिनपछि मात्र कोरोनाको नतिजा आएको थियो।
जेठ २ गते परीक्षणको लागि स्वाब संकलन गरिएकोमा १२ गते मात्र उनमा कोरोना भएको पुष्टि भयो।
यसरी परीक्षणको चाप बढिरहँदा सरकारले भने थप मेसिन खरिद गर्न वा भएकैहरूलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन चासो दिएको छैन।
नेपाली सेनाले पटक-पटक चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा पनि सरकारले त्यसमा एउटा पनि पिसिआर मेसिन खरिद गरेको छैन।
यसअघि चीनबाटै ल्याएको पाँच वटा पोर्टेबल मेसिन काम नलाग्ने भएर थन्किएका छन्।
दैनिक १५ वटा नमूनाको पनि परीक्षण गर्न मुश्किल परेपछि अहिले ती सबै मेसिन प्रयोगविहीन छन्।